I-Eco-Cottage Emaphethelweni Ehlathi Lemvula - I-Twin
I-studio ekhangayo, ekhululekile ye-wooden-cottage emaphethelweni ehlathi lemvula, epulazini elisebenzayo. Sesiphumile emzileni lapho kungekho khona izimoto futhi kungaba nokuthula nokuthula, kodwa futhi singathola umsindo wezinkukhu eziningi, izinyoni zezinyoni nezinye izinyoni epulazini. Ilungele isazi sezemvelo, isibukeli sezinyoni noma kumuntu ofuna ukubaleka kukho konke isikhashana- imizuzu engu-20 nje ukusuka e-Montego Bay, kodwa iminyaka elula kude nesiphithiphithi sempilo yasedolobheni.
Ikotishi lakhiwe phezulu ukusuka phansi ukuze umbono ovela kuvulandi unikeze umuntu umuzwa wokuba sethangeni lezihlahla. Ukuhlala kuvulandi kuhle kakhulu ekubukeni izinyoni - okuyizinhlobo eziningi zazo ezingabonwa epulazini. Buka i-Twin kanye ne-"Cottage by the River" nazo zitholakala e-Animal Farm & Nature Reserve - https://www.airbnb.com/rooms/15834152?s=51 & https://www.airbnb.com/rooms/ 15988643?s=51
Ipulazi lisesifundeni esincane sasemaphandleni futhi ngenxa yalokho omakhelwane bakho bangabantu bezwe abanobungane abahlale bezimisele ukusiza nokweluleka - ngisho noma bengabuzwa. Akunakwenzeka ukuthi izihambeli zibe nokuxhumana okuningi nomakhelwane, ngaphandle uma zifuna ukuxhumana.
Siyaqaphela ukuthi izihambeli zizoba sendaweni engayodwa uma kuqhathaniswa engenazo zokuthenga eziseduze nezithuthi zomphakathi ezivamile. Ngakho-ke, umuntu uzohlala ekhona ukuze abasize ekuthengeni/ekulungiseleleni ukudla nasekuhleleni izinto zokuhamba lapho kudingeka.
Siyaqaphela ukuthi izihambeli zizoba sendaweni engayodwa uma kuqhathaniswa engenazo zokuthenga eziseduze nezithuthi zomphakathi ezivamile. Ngakho-ke, umuntu uzohlala ekhona ukuze a…